ဘုရားသခငျအစပြည်ထောင်စု & မွငျ့မွတျခံရမေ 28 - ဇွန် 3, 2017 အထွေထွေအကြားအမြင် WEEKLY စာဖတ်ခြင်း - အွန်လိုင်းအဘိဥာဏ်ဖတ်
အွန်လိုင်းအဘိဥာဏ်ဖတ် > ဗီဒီယိုများ > ဘုရားသခငျအစပြည်ထောင်စု & မွငျ့မွတျခံရမေ 28 - ဇွန် 3, 2017 အထွေထွေအကြားအမြင် WEEKLY Read
Megan မေလ 27, 2017 ဗီဒီယိုများTagged ကုံ, aries, ကင်ဆာ, capr ..., နေ့စဉ်, ရှေးကောကျ, Gemini, ထွန်းလင်းပြီးပြီ, ISIS, ကျွန်မဖတ်ပါ, ပေါင်ချိန်, osiris, Pisces, အဘိဥာဏ်, စာဖတ်ခြင်း, Sagittarius, scorpio, tarot, Taurus, virgo, အပတ်စဉ်ထုတ်3 မှတ်ချက် ဇွန် 28,3အထွေထွေအကြားအမြင် WEEKLY စာဖတ်ခြင်း - ဘုရားသခငျအစပြည်ထောင်စု & မွငျ့မွတျခံရမေ 2017 အပေါ်
FYI ငါ "Twin Flame" ကျဆင်းသွားပါတယ်။ ကြှနျုပျ၏ဗီဒီယိုတည်နေရာ IN အဆင်မပြေမှုအတွက်ငါတောင်းပန်ဖို့
"Twin Flame ဟာ" ကျော် & အလွဲသုံးစားလုပ်, ဖန်ဆင်းတဲ့လူ, အားလုံးလွှမ်းခြုံတံဆိပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအယူအဆအနကျအဓိပ်ပါယျရွေးကောက်ခံသူတွေကိုဖြစ်ကြပြီးသူတို့၏အမျိုးအရာကနေစစ်မှန်တဲ့သတ္တဝါပိုမိုတိကျစွာ, သူမြား, အလင်းသူတွေကိုထွန်းလင်းပြီးပြီ။ နောက်ထပ်, ယရှေုသညျဘုရားသခငျအားဖြင့်၎င်း, ကျွန်တော်တို့ကိုအဘယ်သူမျှမပြုလုပ်ကရုဏာတော်မရှိဘဲခွာစေနှင့်ရန်အဘို့အအတူတကွပူးပေါင်းခံရ "နှစ်ခုစိတ်ဝိညာဉ်ကို" ၏ပြောဆိုသော။ သမ္မာကျမ်းစာရာကျမ်း, ကုရ်အာန်, Kabbalah နှင့်အခြားအညီကျမ်းစာလာသည်နှင့်ရှေးခေတ်ကျမ်းတစ်ကမ္ဘာလုံးကိုကြည့်ပါ။ သင့်အနေဖြင့်ထွန်းလင်းပြီးပြီ, အလင်းနှင့်ရွေးကောက်သူတွေကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျအမွှာ Flame ဟာ ~ ငါ့ကိုရှာတွေ့မှာမဟုတ်ပါဘူး
ဘုရားသခင့အလုပ်သမားသမဂ္ဂများနှင့်အပြန်အလှန်မြင့်မြတ်သောအလုပ်သမားသမဂ္ဂနတ်ဆိုးများရည်ရွယ်ကြသည်မဟုတ်များအတွက်နတ်ဆိုးများကိုဆိုလိုကြသည်မဟုတ်။ ဗျာဒိတ်တော်များ 13 အားလုံးသူတို့အဘနှင့်အတူတစ်ဦးမီးအနက်ဆုံးသောတွင်းသို့လှဲချခံရခြင်းအကြောင်းနှင့်အားဖြင့်ဤသူသထေူ၏။ သငျသညျအလငျးမနေခဲ့လျှင်ငါသည်သင်တို့အဘို့ကိုဖတ်ကြဘူး
အကြှနျုပျ၏လမ်းညွှန်များ & ငါမျှဝေ & စာရင်းပေးသွင်းခြင်း, မှတ်ချက်, like နှိပ်, စောင့်ကြည့်ဘို့သင့်ကိုကျေးဇူးတင်နှင့်တန်ဖိုးထားတယ်။ namaste ကောင်းကင်တမန်များ
ငါ့အဖို့လှူဒါန်းခဲ့ခြင်းဖြင့်အနာဂတ်ဗီဒီယိုများ & အခမဲ့ဖတ်ကိုထောကျပံ့ပေးပါ
paypal & / သို့မဟုတ် Patreon
တွစ်တာ, Blogtalk & Skype ကို: queenofswords99
တစ်မဲနယ်ယင်း Tee & အခြားမဲနယ်ယင်းဒီဇိုင်းကုန်သွယ်တက် Pick
ပက်ထရီရှာ V. says:
မေလ 27, 2017 မှာ 5: 19 ညနေ
အမြဲအဖြစ် Queenofswords လှပသောစာဖတ်ခြင်း။ (ကျွန်တော်တို့အတူတကွအလုပ်လုပ်) မနေ့ကအလုပျအတှကျအခြားတည်နေရာလွှဲပြောင်းအကြောင်းကိုငါ့အ DM ထံမှအချို့သောဝမ်းနည်းဖွယ်သတင်းရတဲ့နောက်မှငါကြေမွခဲ့သည်။ ဒါကကျနော်တို့အိမ်မှာဦးအကြောင်းကိုပေါ့အဘယျသို့ရှိသူတို့နည်းနည်း 10 မိအချင်းချင်းတွေ့မြင်မိမိပြောင်းကုန်ပြီစတင်သည်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ယခုငါဘာကြောင့်သူကကြောက်တယ်င်သိငါမကြာသေးမီကငါသူ့ကိုလက်လွတ်သောဤရက်သတ္တပတ်သူ့ကိုပြောပေမယ့်သူ့ကိုငါ့စကားပယ်ချခြင်းနှင့်အရမ်းစိတ်ထိခိုက်ကြောင်းကွာလှမ်းသွား၏။ သူဟာတစ်ချိန်ကသူ့မိသားစုကိုစွန့်ခွာ, အခြားသောအခါသမယအတွက်သူငါ့ကိုကြောက်သည်မည်မျှသူ၏မိခင်ဖော်ပြထားခြင်းခဲ့ပါဘူး, ဒါပေမယ့်ငါကအမြဲတမ်းကျွန်မအကြောင်းကိုခံစားရပုံကိုအစမှသူ့ကိုပြောပြသည်င်ကွောငျ့သူ့ကိုငါကြောက်တယ်င်သောတဦးတည်းဖြစ်သင့်တယ်ဘယ်လောက်ကလညျး သူ့ကိုသူဘာမျှပြောပါတယ်နေစဉ်။ အဘယ်သို့ငါသူ့ကိုဖွင့်, တစုံတယောက်သောသူသည်အထူးသဖြင့်မေတ္တာအကြောင်း, ဒါကြောင့်အလွယ်တကူမည်သူမဆိုငါ့ခံစားချက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖူးပါဘူး။ စိတျထဲတှငျအကြှနျုပျသညျစိတျနှလုံးထဲကနေသူနောက်ဆုံးတော့အရမ်းရယ်ရတယ်, သူတစျဦးအရာထို့နောက်အခြားကပြောပါတယ်အကြောင်းမရှိ, သူသည်ငါ့ကိုအကြောင်းကိုသူ၏စိတ်နှလုံးထဲမှာခံစားရပုံကိုပြောပြနိုင်ကပြောသည်သမျှသောစောင့်ရှောက်ဖို့ငါ့အ DM သည်နေ့ညဉ့်မပြတ်ဆုတောငျးလကျြ။ နောက်တဖန်လှပသောစာဖတ်ရုံ peek နှင့် Bam ယူ YouTube မှရောက်လာသည်ကား, ငါတစျဦးကိုယနေ့တွေ့မြင်သွားခဲ့သည်ထင်ခဲ့ပါဘူး !!! ဒီမှာဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ? namaste
Paulette ကယ်လီ says:
အကြှနျုပျတို့သညျအကြှနျုပျတို့ကိုပေးသင့်ရဲ့မက်ဆေ့ခ်ျတန်ဖိုးထားတယ်။ ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်ပြန်ငါထိုကဲ့သို့သောလုပ်ဖို့လိုင်စင်ရ / အရည်အချင်းပြည့်ဖြစ်ကြောင်းကိုမခံစားရဘူးကတည်းကအခြားသူတွေလုပ်ဖို့ငါ့ကိုပြောပြခဲ့ရာမှကိုယ့်ကိုယ်ကိုကိုင်ထားပါ။ ငါ့မွေးနေ့အတွက် 4th အပေါ်ကြောင့်ငါစူပါစိတ်လှုပ်ရှားရတဲ့နေပါတယ်။ ကြှနျတေျာ့တစျခုသမီးကဒီအစဉ်အဆက်ကိုအကောင်းဆုံးမွေးနေ့ဖြစ်သွားကြောင်းပြောတယ် !!!! ငါပြောင်းကုန်ပြီခံစားရတယ်ငါသိ၏။ လုံးဝဖြစ်ပျက်ကိုမြင်မစောင့်နိုင်
Sophie W က says:
ငါသာ 2-3 မိနစ်ပေါ့ငါလုံးဝသဘောတူသည်။ အလွန်ကောင်းစွာကဆိုသည်။ အတိတ်ကာလ၌ငါစာဖတ်သူများမှဖူးနှင့်မှားယွင်းသောသတင်းအချက်အလက်ကိုပေးထားပြီးနောက်သင်အမှန်တရားသူတို့သံသယများနှင့်ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်နှင့်အကအားလုံးကိုလိမ်လည်မှုဖြစ်သောကပြောသည်အဘယျသို့ရှိကြောင်းစဉ်းစားတွေးခေါ် နေ. ခဲ့သည်။ ငါသည်သင်တို့နှင့်အတူနှစ်ခုအံ့သြဖွယ်ဖတ်ဖူးမှဒါသည်ဝမ်းမြောက်မိပါတယ်။ ငါဖြစ်ကောင်းအရမ်းရယ်ရတယ်လအနည်းငယ်အတွင်းအခြားတဦးတည်းရှိသည်လိမ့်မယ်သေချာပါတယ်?